Ihe Ntanetị Twitter: Otu esi eji Twitter (maka ndi mbido) | Martech Zone
Ọ ka dị anya ịkpọ nkụ nke Twitter, ọ bụ ezie na ọ bụ m na-eche na ha ka na-aga n'ihu na-eme mmelite ndị na-anaghị emewanye ma ọ bụ na-ewusi ikpo okwu ahụ ike. N'oge na-adịbeghị anya, ha ewepụla ọnụọgụ anya dị na bọtịnụ mmekọrịta ha na saịtị. Enweghị m ike iche ihe kpatara ya na ọ na-egosi na ọ nwere ike inwe mmetụta na-adịghị mma na njikọ aka zuru oke mgbe ị na-elele okporo ụzọ Twitter na saịtị ntanetị.
Zuru mkpesa… ka anyị hụ ihe ọma stof! Akụ nke ezigbo oge data na Twitter enweghị atụ n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na Facebook nwere ike ịbụ mkparịta ụka na ntanetị, Twitter na-aga n'ihu na-abụ ụda obi n'echiche m. Facebook gosipụtara na nzacha ọtụtụ data, yabụ ojiji na njikọ aka siri ike. Ọ bụghị otú ahụ na Twitter.
Ihe Na-eme Twitter Dị Iche
Twitter bu iyi nke data na-aga n’ihu. Ihe ndekọ ndị ị na - eso, ka iyi ahụ na - adị ngwa. Mana emezighi ya, ewepụtaghị ya, ọ na-ahụkwa mgbe niile. N'adịghị ka usoro ntanetị ndị ọzọ, a pụrụ ịbịakwute akụkọ ị chọrọ ịgwa okwu. Naanị tụfuo ihe @onyedikachi_ na ị nwere ike jidere m ntị ma dee ihe na m. Kedu ebe ọzọ enwere ike ịntanetị? Ma ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nyocha, naanị chọọ okwu ahụ site na iji hashtag, dị ka Ihe ndebanye.
Bido na Twitter
Debanye aha - ma gbalịa ịchọta nnukwu ntanetị Twitter na-enweghị ihe jikọrọ na njikọta dị mgbagwoju anya. Ọ bụghị ndị niile nnukwu ịlesụ na-iwere; ọ na-eju anyị anya oge ọ bụla na anyị nwere ike ịchọta ụzọ dị mma maka ndị ahịa anyị. Aga m akwado ịkwado inwe akaụntụ nkeonwe na akaụntụ ụlọ ọrụ karịa ijikọ abụọ. Site na iji akara, nkwalite dị ntakịrị anya karịa na akaụntụ nkeonwe ebe ị nwere ike iwe iwe ndị na-achọ iso gị.
Melite profaịlụ gị - ọ nweghị onye tụkwasịrị obi ma ọ bụ soro akara ngosi akwa, yabụ kpachara anya tinye foto nke gị maka akaụntụ nkeonwe gị na akara ngosi maka ụlọ ọrụ gị. Wepụta oge iji hazie atụmatụ agba gị wee chọta onyogho mara mma nke ga-adọrọ mmasị ndị mmadụ.
Dowe Bio dị mkpụmkpụ ma dịkwa ụtọ! Gbalị ịkwado URL, hashtags, akaụntụ ndị ọzọ na nkọwa ndebiri abụghị ezigbo mkpali. Nke a bụ ndụmọdụ m - gịnị bụ ọrụ gị na ihe kpatara gị ọpụrụiche? Tinye ha na ndu gi na ndi mmadu ga achota ma soro gi site na nyocha.
Budata Ngwaọrụ Twitter
Ma ị nọ na desktọọpụ, ama ma ọ bụ mbadamba, enwere nwa amaala Ngwa Twitter na-eche gị! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ apụ, ịnwere ike ibudata wee bido ya TweetDeck - a n'elu-obosara ikpo okwu na niile hey na whistles.
Tweets - Twitter akparịtala ụka gbasara ịgbasa ọnụọgụ nke tweets karịrị mkpụrụedemede 140. Ekwenyesiri m ike na ọ bụghị, ọtụtụ n'ime nkà na mma nke Twitter bụ iri ngwa ngwa nke tweet nke ọma. Odi ka ide haiku; ọ na-ewe omume na ụfọdụ echiche. Mee ya nke ọma, na ndị bekee ga-ekekọrịta ma soro.
Jiri Hashtags - Mee ka njikọ gị dị okpukpu abụọ site na ịhọrọ ma ọ dịkarịa ala otu hashtag, abụọ ka mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ụfọdụ hashtag nyocha, anyị depụtara ọtụtụ nyiwe (RiteTag dị ezigbo mma!). Iji hashtags dị irè ga-achọta gị ka ndị ọrụ Twitter na-enyocha ikpo okwu.
Too Na Twitter Gị
Chọọ ndị isi ụlọ ọrụ gị na Twitter, soro ha, kesaa ọdịnaya ha, ma soro ha rụọ ọrụ mgbe ị nwere ike itinye uru na mkparịta ụka ahụ.
Chọọ ndị ahịa gị na Twitter, soro ha, nyere ha aka, soro ha, ma degharịa ọdịnaya ha iji mepụta mmekọrịta ka mma.
Atụla ahụhụ. Zere ikpo okwu ozi na-akpaghị aka, na-edegara ndị mmadụ ozi na-enweghị isi, yana iji ya too onye n’eso gi atụmatụ. Ha na-akpasu gị iwe, ha na-ejikwa ọnụọgụ mee ka ọnụọgụgụ gị karịa ka ha egosighi gị ọrụ ị na-arụ.
Kwalite Mgbe Prov Na-enye Uru
Enwere mmemme na-abịa? Hazie Tweets nke na-agụta ihe omume ahụ yana ndụmọdụ gbasara otu ụmụazụ gị ga-esi rite uru na ịga.
Nye ego mgbe ị nwere ike, Twitter hụrụ nnukwu koodu coupon ma ọ bụ ego.
Adịghị naanị ịkwalite, nye uru. Na-ege ntị n'okwu ndị na-eso ụzọ na inye ụfọdụ ndụmọdụ n'ihu ọha ga-akwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ.
Cheta na Tweets na-efegharị… mgbe ịnwere nnukwu ihe ị ga-akọrọ, kesaa ya n'oge ole na ole.
Jikọta WordPress na Twitter
Mpempe Azụmahịa Ndị Dị Mfe - Na - enyere gị aka ịkekọrịta, nyochaa ma bulie okporo ụzọ gị na ọnụọgụ nke igbu onwe gị nchịkọta atụmatụ.
Ma ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebe ọdịnaya gị na Twitter, Jetpack ngwa mgbakwunye kpọsara atụmatụ na-eme ya n'ụzọ zuru oke!
Cheta, Twitter bụ marathon, ọ bụghị ịgba ọsọ. Mee ka ị na-eso nke ọma na oge na-aga, ị ga-ahụ uru dị na ya. Dị ka imeziwanye mmasị, ị gaghị ezumike nká mgbe obere obere tweet gị. Ihe omuma a site na Salesforce na-enye ụfọdụ nghọta ọzọ… Amaghị m na ị ga - abụ pro (ọ bụrụ na enwere ụdị ihe ahụ), mana ọ bụ ezigbo ndụmọdụ.
Tags: too ndị na-eso ụzọ gịhavehtagsotu esi eji twitterretweettweetTweetdeckTwitterngwa ngwa twitterntọala twitterOzi infographictwitter iru
Dee 15, 2015 na 5: 13 AM
Ihe mara mma maka ndị na-achọ mgbasa ozi mgbasa ozi na ndụmọdụ SEO bụ isi… nọgide na-arụ ọrụ ahụ nke ọma!